Izixhobo zokuSebenza eziNye | Martech Zone
NgoMgqibelo, Agasti 29, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UAdam Omncinci
Douglas Karr Inokuba wayebetha engqondweni yam xa wayebhala Ungawenza njani umsebenzi omnye. Kudala ndicinga kakhulu ngale nto yokwenza imisebenzi emininzi, malunga nokutsiba rhoqo ukusuka kwi-tidbit ukuya kwi-tidbit kunye nokwenza ngaphezulu komsebenzi omnye ngaxeshanye uziva ngathi kundibamba ixesha (kwaye kundenza ndizive ndilumkile). Xa ndibhala iingxelo, iiposti zebhlog okanye amaxwebhu esicwangciso, ndiyeka i-flotsam kunye ne-jetsam ye-dock yam ye-MacBook Pro kunye nescreen ukuze indiphazamise kakhulu.
Izolo nje, mfo wam Isicwangcisi seBrand Strategist, UBrant Kelsey, Undibonise izixhobo ezimbini zemveliso eyilelwe ukuvumela umntu ukuba ajonge ixesha elide kwinto enye. Khawufane ucinge. Izixhobo zokuvelisa ezikhuthaza ukuthathelwa ingqalelo kwexesha elide kumsebenzi omnye endaweni yokutyhala i-ajenda yokuhamba. Unomdla? Abasebenzisi beMac, jonga ezi zicelo:
BhalaRoom - indawo yokubhala yasimahla
Esi sicelo sijika sijike sonke isikrini sibe lujongano olulula olufihla zonke ezinye izinto ezibonakalayo kunye neebhloko ezivelayo zezikhumbuzo kunye neencoko windows. Ukuba uthanda ukuthayipha amanqaku akho kwiminyhadala, i-WritRoom iya kuba yindlela entle yokukugcina unqakraza nge-imeyile, iakhawunti ye-Twitter, iFacebook kunye nazo zonke ezinye izinto ezinokukugcina ungagxili kulwazi oluzisiweyo.
Ukuhamba komoya-ukufihla okuzenzekelayo kwezicelo ezingasebenziyo
Umoya oMdaka wenza oko kuthethwa ligama lalo. Lungisa nje useto ukuthanda kwakho kunye nesicelo sisebenza ngasemva ukufihla usetyenziso lwesicelo windows. Ndicinga ngayo njengokufumana umgcini wendlu achola amaphepha aqhekekileyo kwaye abeke iincwadi ezishelufini ngelixa usebenza kwiingxelo zakho.
Xa uthatha eyakwaDouglas cebiso ukuvimba iiyure ezimbalwa ngoMvulo ukugxila kwiprojekthi enye, mhlawumbi ungasebenzisa esinye sezixhobo.
Uhlaziyo: I-WordPress ngoku inayo imowudi epheleleyo yesikrini evumela ukuba ubhale ngaphandle kwayo yonke into yokulawula!
tags: isikrini esipheleleumsebenzi omnyeumbhaloizixhobo zokubhala
Agasti 30, 2009 kwi-9: 17 AM
Andifuni sixhobo somsebenzi omnye, uqeqesho nje oluncinci. Cima okanye sukuvula ezi zicelo ziphazamisayo xa ufuna ukugxila kumsebenzi omnye. Ilula kwaye iyandisebenzela ngakumbi xa kufuneka ndibhale intetho okanye iposti yebhlog okanye iphepha. Kwaye ngendlela imveliso inyuka xa usenza umsebenzi omnye.
Awudingi kuba nexhala lokuba imeko-bume yakho iya kuyiphawula ukuba usebenzisa ulwabelwano ngexesha, ukwaba ixesha lomsebenzi othile kwaye xa usenza oku kuphela. Le yindlela iikhompyuter ezazicwangciswe ngayo kwiintsuku zakudala xa onke amashishini ayenekhompyuter enye ebiza kakhulu. Abasebenzisi basenoluvo lokuba oko kwakusebenzela bona. Icebo yayikukukhetha amaxesha amade ukuze ixesha lokuphendula lanele ukwenza lo mfanekiso nomntu. Njengokuba sinengqondo enye kuphela, oku kubonakala kuyinto elungileyo yokwenza i-algorithm yokucwangcisa imisebenzi yam.
Agasti 30, 2009 ngo-3: 56 PM
Ndipholile, Nila! Khange ndiqonde nokuba kukho izixhobo phaya ngaphandle kwaye yile nto ndiyithandayo iBhlog yeTekhnoloji yeNtengiso ukusoloko unikezela. Enkosi kakhulu ngale posi!
Agasti 31, 2009 kwi-2: 14 AM
UmKristu ulungile ukuba esona sixhobo silungileyo sokwenza umsebenzi omnye yingqondo yakho. Ukuqonda ukuba uthathe isigqibo sokujonga into enye kuphela lolona khetho lubalulekileyo onokulwenza xa usebenza.
Agasti 31, 2009 kwi-7: 42 AM
Ewe… ndiyavumelana nomKrestu… .. ngokuqinisekileyo yingqondo yakho.
Sep 8, 2009 ngo-1: 25 PM
Ngaba ukhona umntu oneengcebiso ezifanayo nePC?
Okt 9, 2009 ngexesha 2:41 AM
Ndingacebisa (njengoko ndenzile kwiposti yam malunga neZombies kunye neArt of Single Tasking) ndisebenzisa i-DarkRoom, uguqulelo lweWindows lweRekhodi.
Oktobha 1, 2009 ngo-6: 42 PM
Ndonwabile ukuba ndiyifumene le posi! Ndijolise kwimicimbi ngenxa ye-adhd yam kwaye xa ndikwi-Intanethi ndikhona kuyo yonke indawo. Ngaphezulu kweeapps ezimbalwa kwaye akukho ngaphantsi kweshumi leetabhu ezivuliweyo. Ukuba yi-software junkie ndikwazile ukufumana ngaphezulu kweenkqubo ezimbalwa zokunceda kulawulo lwexesha, umbutho kunye nemveliso. Ndikwasebenzisa izongezo ze-firefox kwiithebhu, amanqaku encwadi kunye nokunye.
Nazi ezimbalwa endizisebenzisayo…
-TooManyTabs (gcina iithebhu ezininzi njengoko ufuna kumqolo okhethiweyo, imiqolo engenamda)
-TabFocus (yalatha kuyo nayiphi na ithebhu kwaye uvula ithebhu)
-InstaClick (rt cofa nayiphi na i-url kwaye ivule kwenye ithebhu-nayo isebenza kwi-gmail kodwa hayi iThunderbird)
-Susa iiTabs (ivala iithebhu ngasekhohlo, ekunene)
-AddThis (rt cofa kwaye wongeza nayiphi na i-url kwinani leendawo zentlalo-zilungele ukwenza i-tweeting)
Enkosi ngomxholo oluluncedo kakhulu nolufundisayo. Ndingumbhalisi omtsha nomlandeli!